Konke mayelana neBrazil - Konke ongakubona nokukwenza | Ukuhamba kwe-Absolut
IBrazil izwe laseNingizimu Melika. Kungokwesihlanu ngobukhulu emhlabeni. Kuyo, asikwazi ukuphuthelwa iRio de Janeiro, enoKristu uMhlengi futhi ebekwe njengelinye lamadolobha amahle kakhulu ahlanganisa isiko namathafa amahle. Ngakolunye uhlangothi, iSao Paulo iyisikhungo sezomnotho nedolobha elidinga kakhulu ezokuvakasha elihlanganisa ezokungcebeleka nezikhumbuzo eziningi okufanele zivakashelwe, njengeCatedral da Sé noma isigodlo sezindela, phakathi kwabanye.
Inhlokodolobha yayo iBrasilia nayo igcwele amapaki wokuvakashela kanye ne-Its Metropolitan Cathedral noma iPlaza de los Tres Poderes. Vele, uma into yakho ingokwemvelo kakhulu, lapho-ke awungeke uphuthelwe yizimpophoma ze-Iguazu. Ngaphezu kwezindawo ezingasolwandle esingagqamisa kuzo zombili leyo eyaziwa njengeFlorianópolis noma iLopes Mendes kanye nolwandle olungajwayelekile, noma ichibi lemvelo, elinamakhorali asolwandle esizowabona eGalés de Maragogi.
Ezinye izindawo okufanele zibonwe eBrazil yiLençois Mahrenenses, lapho kuhlala khona amanzi nogwadule, noma idolobha lase-Ouro Preto, elinemigwaqo yalo ebiyelwe ngamatshe evumela ukuba sikujabulele ukubuyela emuva ngesikhathi. Ngaphandle kokukhohlwa iGramado, enokuxubana okumangazayo kwamasiko, lapho kubonakala sengathi amasiko aseJalimane afikile.
Izimbali zaseBrazil zisengozini yokuqothulwa
Por Daniel kwenza Izinyanga ze-5 .
IBrazil yizwe eliluhlaza kunazo zonke eNingizimu Melika, izwe lezikhala ezinkulu zemvelo futhi ...
Por Daniel kwenza Izinyanga ze-8 .
IBrazil inezinhlobonhlobo ezihlaba umxhwele zeziphuzo zendabuko kanye neziphuzo zazo zonke izinhlobo. Enye yazo i-capeta, ...
Yazi i-Triple Border: i-Argentina, iBrazil neParaguay
Por Daniel kwenza Izinyanga ze-10 .
I-trifinium iphuzu lendawo lapho imingcele yamazwe amathathu ahlukene ihlangana khona. Enye yezinto ezidume kakhulu yi ...
Por Daniel kwenza Izinyanga ze-12 .
Isiko le-Halloween, eligujwa ngobusuku buka-Okthoba 31, ligxile kakhulu emazweni athile ase-Anglo-Saxon ...
Amasiko kaKhisimusi eBrazil
Por Luis Martinez kwenza Unyaka we-1 .
Amasiko kaKhisimusi eBrazil angumphumela wokuhlanganiswa kwamasiko akha lelo zwe laseMelika. Ngu…
Por USusana godoy kwenza iminyaka 2 .
Yize kuyizwe lesihlanu ngobukhulu emhlabeni futhi kungokwesithupha elinabantu abaningi emhlabeni cishe nge-208 ...
Por U-Alberto Legs kwenza iminyaka 2 .
Uqondwa njengolimi lobuciko njengolomdabu njengoba lunjalo emhlabeni wonke, umdanso uzikhulumela wona uvela ezingxenyeni ezahlukene zomhlaba ...
Por U-Alberto Legs kwenza iminyaka 3 .
Lapho umhlaba uthola ukuthi iningi lezimangaliso zomhlaba wasendulo lalikhohliwe yisikhathi, ...
Izitebhisi ezi-5 ezimibalabala emhlabeni jikelele
Por U-Alberto Legs kwenza iminyaka 4 .
Ubuciko basemadolobheni abuphunyuki kunoma yisiphi isici senqubo yethu: izakhiwo, ukuwela idube ngisho nezitebhisi ...
Imizi engu-8 enemibala yaseLatin America
Kwamanye amadolobha amakoloni izinganono zisalala ezinqabeni ezindala futhi umbala wezindonga uqokomisa kancane ...
Por U-Alberto Legs kwenza iminyaka 5 .
Isidlakela saseNingizimu Melika sesiphenduke indawo ethandwa kakhulu ngabavakashi nabahamba ngobhaka ngenxa yesimo saso njengepharadesi elishisayo, ...